Sokatra 24 indray no sarona tao Nosy La Reunion - Informations et Actualités sur Madagascar
Société Sokatra 24 indray no sarona tao Nosy La Reunion
Sokatra 24 indray no sarona tao Nosy La Reunion
by Alpha world on 05 h 45 in Société
Mitohy ihany ny fanondranana sokatra. Sarona tany amin’ny Nosy La Réunion ireo sokatra “radiata”, miisa 24, avy eto Madagasikara. Ny 11 jolay lasa teo, nandritra ny fidinan’ireo mpikambana avy ao amin’ny Birogady misahana ny zavaboahary aty amin’ny ranomasimbe Indiana (BNOI) sy ny Foibe misahana ny sakafo, ny fambolena ary ny ala
(DAAF) ao La Réunion no nahatrarana ireo sokatra miisa 24. Tao amin’ny tokantranon’ny lehilahy iray monina ao Saint-Pierre no nahitana izany.
Ankoatra ireo, mbola nahasarona atodin-tsokatra miisa 60 ihany koa izy ireo. Natao tao anatin’ny toerana fanakotrehana atody izy ireo. Mazava araka izany fa natao ho fakana taranaka ireo sokatra 24 sarona ireo. Araka ny fanambaran’ny fiadidiana ny Tanàna, tsy nahitana zana-tsokatra tao amin’ilay trano nefa misy fitaovana fanakotrehana tao anatiny. Heverin’izy ireo noho izany fa amidy ny sokatra rehefa foy.
Ny fanambaran’ny DAAF no nahalalana fa, araka ny lalàna manan-kery, ny fiompiana biby arovana dia misy alalana manokana avy amin’ny fanjakana vao azo atao. Mbola ny fanazavan’ireo tompon’andraikitra ihany anefa no nahalalana fa tsy nahitana taratasy manambara ny fahafahany mitana ireo biby ireo tao amin’ny tompon-trano. Nandray fanapahan-kevitra avy hatrany izy ireo ka nanala ireo biby tao aminy ary nametraka izany amin’ny toerana manokana mba ahafahana mikarakara azy ireo.
Noho ireo karazana fandikan-dalàna ireo, sazy an-tranomazina herintaona miampy lamandy 15.000 euros no mety hihatra amin’ity lehilahy ity.
By Alpha world at 05 h 45